Imba - Prairie State Legal Services
Kusuma Mutungamiriri wedu Mutsva Mukuru: Denise E. Conklin
Kubvumbi Mwedzi Wedzimba Wakanaka!
Ziva kodzero dzako dzekugara.
Isu Takagadzirira Kuwedzeredzwa Kuwedzera
Tauya kuzoshandira nharaunda yedu. Zvishandiso zvichiri kuwanikwa.
UNOGONA BATSIRA SEI
Prairie State Legal Services inopa mahara emutemo rubatsiro kune vanhu vane yakaderera- kusvika pamwero-mari.
Kudzingwa Kubatsira Illinois Hotline
Yemahara Yemutemo Rubatsiro kune Illinois Vagari Vanotarisana Nenhanho Yekudzingwa
Kana iwe uchifunga kuti unokodzera kupihwa rubatsiro rwemahara rwepamutemo kuti ubvise kutongwa kwako kwecannabis, baya "Dzidza Zvakawanda" kana kushanyira newleafillinois.org kuti utange nhasi!
Joinha timu yedu muhondo yekuunza kuringana zvakaenzana kune vese.
Prairie State Legal Services inopa mahara mabasa ezvemitemo nokuti vanhu vane mari shoma uye vane makore makumi matanhatu zvichikwira vane serious matambudziko epamutemo ehurumende uye vanoda rubatsiro rwemutemo kuzvigadzirisa. Kune mahofisi gumi nemaviri emahofisi anoshandira mataundi makumi matatu nematanhatu kuchamhembe kweIllinois.
Kuenzana Kuwana Kururamisira
Mazuva ese, vanhu kuyambuka Illinois vanonyimwa kodzero dzekutanga idzo dzavanokodzera pasi pemutemo nekuda kwekuti havakwanisi kuwana gweta. Ndicho chinangwa chedu kushandura izvo.
Prairie State Legal Services inopa mahara emutemo rubatsiro kune vanhu vanozvida zvakanyanya uye vanogona kuwana zvishoma.
Kuwanikwa kwerubatsiro rwepamutemo rwevanhu kunogona kuita mutsauko wese kuvavakidzani vedu vari kurwira kugara mudzimba dzavo, kutiza mhirizhonga mudzimba, zvakachengeteka kune veterans kana vanhu vakaremara, kana kugadzirisa zvimwe zvinetswa zvemitemo zvinoenda pamoyo pekuchengetedzeka kwavo. uye kugara zvakanaka.
Vanenge vanhu mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe munzvimbo yedu yebasa vanogara muhurombo. Vane mhuri, tariro uye zviroto. Ivo vavakidzani vako. Ivo vanogara munharaunda dzaunodana kumba. Nharaunda dzedu inzvimbo irinani kwatiri kana rubatsiro ruripo kana rwuchidiwa
17 maawa apfuura
¡Elimine sus antecedentes penales! Prairie State Legal Services se enorgullece de colaborar con la Secretaria del Tribunal Circuito, Candice Adams, en ofrecer una clínica de eliminación de antecedentes penales el sábado, 30 de julio, a las 9 AM hasta las 3 PM en Wheaton. Se recomienda encarecidamente la inscripción por avanzado. Regístrese aquí: ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Circuit Clerk mukuru webumbiro anosarudzwa makore mana ega ega nevavhoti veDuPage County. Mabasa uye mabasa eMunyori Wedunhu anogadzwa nemutemo wenyika, se ...